ပွညျတှငျးသတငျး Archives - ThutaSone
March 13, 2020 ThutaSone 0
မွေးဖွားပြီးခနချင်းမှာပဲ မိဘတွေကို ရီပြခဲ့တဲ့ ကလေးငယ် အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေ ……
February 7, 2020 ThutaSone 0
မွေးဖွားပြီးခနချင်းမှာပဲ မိဘတွေကို ရီပြခဲ့တဲ့ ကလေးငယ် အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေ …… မွေးဖွားပြီးခနချင်းမှာပဲ မိဘတွေကို ရီပြခဲ့တဲ့ ကလေးငယ် အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေဟာ မွေးပြီးပြီးခြင်း ငိုကြပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ မိခင်ဗိုက်ထဲမှာ ရှိစဉ် အပြင်က စကားသံတွေကို ကြားနိုင်သလို၊ မွေးဖွားပြီးတာနဲ့ အမြင်အာရုံကိုရရှိတတ်ကြပါတယ်။ အမြင်အာရုံတွေ၊ အကြားအာရုံတွေကို […]
လှိုင်သာယာမှ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးဝါးလာခြင်းကြောင့် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေ….
February 6, 2020 ThutaSone 0
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအဖြစ် သံသယရှိသူ တစ်ဦးရန်ကုန်- ကွမ်ကျိုး ခရီးစဉ်မှာ ပါလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူနာ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းသက်ခွင့်ပြု မပြုဖို့ အတန်ကြာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သံသယရှိသူ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့နယ်က လူကို ဝေဘာဂီဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ထိမ်းသိမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကတော့ ကျန်းမာရေး […]
သူငယ်တန်းမှ ၉ တန်းအထိ ( ၄ တန်း/၈တန်း မပါ) ၄ . ၃ . ၂၀၂၀ နှင့် ၁၀ . ၃ . ၂၀၂၀ ကြား ကာလအတွင်း စာ​မေးပွဲစစ်ပါမည် ….
February 4, 2020 ThutaSone 0
သူငယ်တန်းမှ ၉ တန်းအထိ ( ၄ တန်း/၈တန်း မပါ) ၄ . ၃ . ၂၀၂၀ နှင့် ၁၀ . ၃ . ၂၀၂၀ ကြား ကာလအတွင်းစာ​မေးပွဲစစ်ပါမည်။ ၄ တန်း/ ၈ တန်း ၂၄ […]
တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တခြားနိုင်ငံတွေထိပါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်…အစောပိုင်းကာလတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတွေ့ရပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သံသယလူနာ ၆ ဦးထိ ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောဆိုကြောင်း အကုန်သိ သတင်းဌာနက ဖော်ပြတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သိရပါတယ်…. အဆိုပါ သံသယ လူနာ […]
အခြေခံပညာ စာသင်ကာလ မူလအတိုင်း ပြန်ထားဖို့ ပညာရေးဝန်ကြီး သဘောတူလိုက်ပါပြီ
February 3, 2020 ThutaSone 0
အခြေခံပညာ စာသင်ကာလ မူလအတိုင်း ပြန်ထားဖို့ ပညာရေးဝန်ကြီး သဘောတူ ဓါတ်ပုံ – အမျိုးသားလွှတ်တော် (ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီး ကို ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်) အခြေခံပညာ စာသင်ကာလကို မတ်လအထိ တိုးမြှင့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မူလအတိုင်း […]
လိုအပ်သူတွေအတွက် တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ရထားအချိန်စာရင်း​နဲ့ လက်မှတ် တန်ဖိုးများ
January 16, 2020 ThutaSone 0
တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ရထားအချိန်စာရင်း​ နဲ့ လက်မှတ် တန်ဖိုး တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ရထားအချိန်စာရင်း​တွေကို လိုအပ်သူတွေအတွက် ရထားလက်မှတ် တန်ဖိုးတွေပါ တင်ပေးလိုက်ပြီ ကိုယ်လိုရင်ရှာရတာမလွယ်လို့…။ ထောင်ချီတဲ့ရထားစီးပြည်သူများအတွက် ပြန်ပြီးဝေမျှပေးကြပါ (ရန်ကုန် မှ မန္တလေး)မနက်အမြန်ရထား နံနက်6:00 AM ရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ် အထက်တန်း […]
December 25, 2019 ThutaSone 0
DR.အေးဇော်ထွန်းတို့သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့သေဆုံးမှု အမှုမှန်ပေါ်ပါပြီ ဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ မော်လမြိုင်မြို့မှပျောက်ဆုံးနေသောဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းတို့သားအဖနှစ်ယောက်မောင်းနှင်လာသောကားမှာ အမူးလွန်၍အတ္ထရံမြစ်ထဲသို့ထိုးဆင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်. 😥😥 ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တော့ သေမှုသေခင်းမတော်တဆမှုဘဲဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်.. တစ်ကယ်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ် (၅) ရက်နေ့ကတည်းကမော်လမြိုင် မြို့ မျှော်လင့် (၁) ရပ်ကွက် ညောင်ပင်ဆိပ် ၊ မျှော်လင့်လမ်းမကြီးဘေးတွင်နေထိုင်သောဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းနဲ့ သုံးနှစ်သားရင်သွေးငယ်တို့ဟာ ညအချိန်စားသောက်ဆိုင်မှအပြန်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှအပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြပေမယ့်လည်းရှာမတွေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး CCTV မှတ်တမ်းများအရ […]
သားငယ်ကိုပွေ့ဖက်ပြီး ရေလွတ်တဲ့နောက်ခန်းထဲကိုသွားပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်ပိုင်းအထိသားအဖနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုမျာ
သားငယ်ကိုပွေ့ဖက်ပြီး ရေလွတ်တဲ့နောက်ခန်းထဲကိုသွားပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်ပိုင်းအထိသားအဖနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုများ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်သတင်းပေမဲ့ နမူနာယူ ဆင်ခြင်နိုင်စေရန်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်မြို့မှပျောက်ဆုံးနေသောဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းတို့သားအဖနှစ်ယောက်မောင်းနှင်လာသောကားမှာ အမူးလွန်၍အတ္ထရံမြစ်ထဲသို့ထိုးဆင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်. ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တော့ သေမှုသေခင်းမတော်တဆမှုဘဲဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်..တစ်ကယ်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ် (၅) ရက်နေ့ကတည်းကမော်လမြိုင် မြို့ မျှော်လင့် (၁) ရပ်ကွက် ညောင်ပင်ဆိပ် ၊ မျှော်လင့်လမ်းမကြီးဘေးတွင်နေထိုင်သောဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းနဲ့ သုံးနှစ်သားရင်သွေးငယ်တို့ဟာ ညအချိန်စားသောက်ဆိုင်မှအပြန်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှအပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြပေမယ့်လည်းရှာမတွေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး […]
”ပြည်သူတွေ လက်ထဲ ရောက်လာမယ့်ငွေစက္ကူ ပုံရိပ်များ” စုစည်းထားပါတယ်”……
December 22, 2019 ThutaSone 0
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ပုံဖြင့် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့မှစတင် ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်မှု အရ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံဖြင့် ငွေစက္ကူ ပုံစံသစ် အမျိုးမျိုးကို […]
ဘာမှမကျန်အောင် အကုန်လှူပြီးနောက် အသောကမင်းကြီး ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးတောင်းခဲ့သည့် ဆုတောင်း …..